ကမ္ဘာတဝှမ်း စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေကြတဲ့ Ebola Virus အကြောင်း | မျိုးမြန်မာ
ကမ္ဘာတဝှမ်း စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေကြတဲ့ Ebola Virus အကြောင်း
Posted by myomyanmar on August 8, 2014
Posted in: သတင်း.	Tagged: အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်, အီဘိုလာအန္တရယ်, Ebola Virus.	Leaveacomment
ယခုအချိန်တွင် အနောက်အာဖရိကပြည်နယ်များဖြစ်တဲ့ Liberia နဲ့ Sierra Leone များအား Ebolaဟူ၍ အမည်ပေးထားတဲ့ ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါရဲ့ အန္တရာယ်စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိလာတဲ့နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း ခံရပါတယ်။ ကျောင်း၊ ဈေးတွေနဲ့ လူအစုအဝေးနေရတဲ့နေရာတွေကို အကုန်ပိတ်ထားပါတယ်။ ယနေ့ချိန်ထိ သေဆုံးသူဦးရေ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်တိုးလာပြီး ကူးစက်နှုန်းမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကမ္ဘာတဝှမ်း စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေထိ ရောက်ရှိလာပါတယ်။
အာဖရိကဘက်ကို ဦးတည်တဲ့လေယာဉ်ခရီးသွားခြင်းကိုလည်း အများအားဖြင့် ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။ ဒီရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ဒေါ်လာ သန်း၁၀၀ ရံပုံငွေအဖြစ် ပေးအပ်ထားကြောင်းလည်း သိရှိထားပါတယ်။
ဒီ Ebola ရောဂါဟာ အာဖရိကတိုက်ရှိ မျောက်၊ မျောက်ဝံများနဲ့ အခြားတိရိစ္ဆာန်များမှာ တွေ့ရှိထားတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကို ကူးစက်တဲ့ပုံစံကတော့ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်တဲ့အရည်ကနေ အဓိကအားဖြင့် ကူးစက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရဲ့အသားကို သတ်ဖြတ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် စားသုံးခြင်းကနေလည်း ကူးစက်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနေတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရဲ့ မစင် ဒါမှမဟုတ် ဆီးကို တို့ထိမိခြင်းကြောင့်လည်း ကူးစက်နိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခြင်းအရ သိရှိနိုင်ပါတယ်။
လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကြား ကူးစက်တဲ့ပုံစံကတော့ ပုံမှန်ရောဂါကူးစက်ခြင်းခံရတဲ့ သူထံကနေ ရောဂါလက္ခဏာမပြမီ ကူးစက်လို့မရသေးပါဘူး။ မိသားစုဝင် ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ သူတစ်ဦးကို စောင့်ရှောက်ရင်းဖြစ်စေ၊ သေဆုံးဖို့ပြင်ဆင်ပေးရင်းဖြစ်စေ၊ ဒါမှမဟုတ် ဈာပနကျင်းပရင်းဖြစ်စေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးရုံမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာကို တစ်ကိုယ်လုံး ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ဝတ်ရုံမဝတ်ပဲ ကုသတယ်ဆိုရင်တော့ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ခြင်၊ ပိုးကောင်တွေကိုက်ခြင်းကနေ ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေတော့ အခုထိတွေ့ရှိထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
ဒီ Ebola ကူးစက်နိုင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ဆေးမရှိသေးသလိုပဲ ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးလည်း မတွေ့ရှိသေးပါဘူး။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ ကူးစက်ပြီးအစောပိုင်းမှာ ကိုယ်ပူခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အကြောအဆစ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း နဲ့ အားပျက်ခြင်းတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီကနေတဆင့် အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျောခြင်း၊ မျက်လုံးနီမြန်းခြင်း၊ အနီရောင်အဖုတွေထွက်လာခြင်း၊ ရင်ဘက်အောင့်ပြီး ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်အလွန်ကျခြင်းတွေဖြစ်လာပြီးနောက် လူနာရဲ့ မျက်လုံး၊ နှခေါင်း၊ နားနဲ့ စအို အစရှိတဲ့နေရာတွေကနေ သွေးများစီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဒီလူနာဟာ အသက်ထွက်ဖို့ပဲ စောင့်ရမယ့်အခြေအနေရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
← ရဟန်းတော်နှင့် မာတုဂါမများ
ကုလားလိမ် ကုလားကျစ်နဲ့ ကဒ်အတုလုပ်ကာ ၀ါဖြန့် ရန်တိုက်ပေးနေကြသော ကုလားတွေရဲ့ ရန်ကို အယုံမလွယ်မိစေပဲ သတိထားကြပါရန်…. →